संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामाथिको बहस सकियो,कहिले होला त फैसला ? - Nepal's No.1 News portal
संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामाथिको बहस सकियो,कहिले होला त फैसला ?
काठमाडौं – संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा बहस सकिएको छ । शुक्रबार एमिकस क्युरीका रुपमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले राय दिएसँगै बहस सकिएको हो। इजलासले सहभागी अधिवक्ताहरुलाई सोमबारसम्ममा बहस नोट उपलब्ध गराउन भनेको छ। त्यसपछि यो मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहने र जुनसकै बेला फैसला हुनसक्ने छ।
पक्ष र विपक्षका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएपछि चार दिन एमिकस क्युरीमा रहेका नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसियसनका ५ वरिष्ठ अधिवक्ताले राय दिएका हुन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि सुनुवाइ सुरु भएको थियो। सुरुका १३ दिन रिट निवेदक पक्षका ७२ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिल र निजी कानुन व्यवसायी गरी ४८ जनाले ९ दिन बहस गरेका थिए।
बहस सकिएपछि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले फागुन १० गतेभित्र बहस नोट दिन यस रिटमा पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरीका रुपमा चयन भएका कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् ।
फैसलाबारे जबराले भने,’ त्यसपछि हेर्दाहेर्दैमा जान्छ । ११ गते, /१२ गते जति पनि जान सक्छ ।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफासिमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। उक्त विघटनविरुद्ध १३ वटा रिट परेका थिए।
रिट निवेदकले संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। तर प्रधानमन्त्री पक्षले भने संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने भन्दै रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।